The Irrawaddy's Blog: သဇင် နဲ့ မိုးဟေကို အများဆုံး အရှာခံရ
သဇင် (ဓာတ်ပုံ - ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း http://shweamyutay.com)
သဇင် နဲ့ မိုးဟေကိုတို့ကို တွေ့ဖို့ ဧရာဝတီ ဘလော့ကို ရောက်လာသူ အင်မတန် များပြားနေပါတယ်။
ဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက် ၃၀ အတွင်း ဧရာဝတီ ဘလော့ကို ရောက်လာကြသူတွေ အများဆုံး ရှာဖွေကြတာ သူတို့ ၂ ယောက်ပါပဲ။
သဇင်နောက်ကို လိုက်ရင်း ရောက်လာသူက ငါးထောင်နီးပါး၊ မိုးဟေကို နောက်ကို လိုက်သူက လေးထောင် ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ သက်မွန်မြင့်တို့ကို ရှာဖွေသူအင်အားလည်း မသေးပါဘူး။ တထောင်ဝန်းကျင်စီ ရှိကြပါတယ်။
တခြား စကားလုံး၊ အမည်တွေကို ရှာဖွေကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဂူဂဲလ်က ပြတဲ့ စာရင်းမှာတော့ အများဆုံး ရှာဖွေကြတဲ့ စကားလုံး အမည် ၁၀ ခုကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။
မိုးဟေကို (ဓာတ်ပုံ- Fashion Euphoria)
ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်မှာ မျက်လုံးကို လုံလုံခြုံခြုံ ကာရံထားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက် ၃၀ အတွင်း ဧရာဝတီ ဘလော့ကို ရောက်လာကြသူတွေ အများဆုံး ရှာဖွေကြတဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို ၃ မျိုး မြင်နေရတာက ရှာဖွေသူတွေရဲ့ စာစီစာရိုက် မတူညီချက်ကြောင့်ပါ။ ၀င့် မှာ တချို့က အောက်ကမြင့်ကို အရင် ရိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဇော်ဂျီဝမ်း အဟောင်းအသစ်ကြောင့် ၀လုံးက ၂ မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က စာလုံးပေါင်း ၃ မျိုး ဖြစ်သွားတာလို့ ယူဆရပါတယ်။
Posted in: Celebrity , Data , Photo , ဓာတ်ပုံ , အချက်အလက် , အနုပညာ ရပ်ဝန်း
July 22, 2012 at 10:58 PM
Any other news to post????
Tin soe said... :
နာမည်ကြီးလို့ရှာကြတာပေါ့နော်
moses B. said... :
သဖင် နဲ မိုးဟေကို တို့ဟာ အများဆုံး အရှာခံရ တာဟာ ဘာအကြောင်းလဲ။ ပြောပြ ပေးလို့ရမလား။
ကျတော်ကတော့ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးကို (0-0)နဲ့ သရေပွဲ ကျစေချင်ပါတယ်.။
mi lann said... :
တော်သေးတာပေါ့။ ဧရာဝတီ ဘလော့မှာ ရှာခံရလို့။ ကျွန်တော် ပထမ ထင်တာ အိမ်မှာများဝင်ရှာခံရသလားလို့ စိုးရိမ်သွားရသေးတယ်။ ငါ့ ညီမငေးတွေကို....ငှဲ..ငှဲ။
Ni Lay said... :
သဇင့် အသံကတော့ တော်တော်လေးကောင်းတယ်နော် ...
July 23, 2012 at 1:49 PM
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လေးတွေရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ။ နောက်ထပ် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုအပိုင်းတွဲလေးထွက်အုံးမယ် ဆိုတာ စောင့်စားလျှက်ပါ။
sai sai said... :
July 23, 2012 at 2:44 PM
July 30, 2012 at 1:50 AM
good... for Thet Mon.
ရန်ကုန်မှာက အလုပ်သမားဇေးတွေကအရမ်းနည်းတယ် ကျွန်တော်ကဆောက်လုပ်ေ၇းက အမိုးဒိုင်းမှာလုပ်တာပါ အစကတော့ပန်း၇န်လုပ်မလို့ပါဇေးကအ၇မ်းနည်းတယ် ကို့စ၇ိတ်ကိုစား 3500နဲ့4000ပဲရတယ် ရန်ကုန်မှာကစားစရိတ်ကြီးတယ် နေပြည်တော်မှာတောင် 5000ရတယ် ထားဝယ်မှာကစားရိတ်ညိမ်း7000ရတယ် ရန်ကုန်ကအလုပ်သမားပေါလို့လားတော့မသိဘူး 7.10.2012 ကမြောက်အုပ်ကလာပက တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာမှာ လုပ်တာတော့5500ရတယ် အခုသန်လျှင်မှာတော့ အမိုးဒိုင်းမှာလုပ်တာစရိတ်ညိမ်း 4000ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့မှာမိဥားစုတွေနဲ့ဆိုတော့ငွေ4000နဲ့ကစားလောက်ရုံပေါ့ အပိုအရှန်ကြမရှိဘူးပေါ့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်ကအလုပ်ဥမားဇေးလေးတိုးပေးစေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ...
naythurain bloog said... :
ဝံကလေးကို မြန်မာပြည်မှာပဲ ရှိစေချင်ပါတယ် တဲ့
~ ၀ံကလေး တကောင် အကြောင်း ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ပို့စ် ၂ ပုဒ် တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီဝံလေးကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်က မောတောင် ဒေသက လာဝယ်မဲ့သူတေ...